ဘရာဇီး ငှက်ရိုး: ဒုက္ခ...ဒုက္ခ။
ခင်ညွန့်လေသံနဲ့ပြောနေပြန်ပြီ။ Aye Aye Soe Win,Min Tharr,Zaw Ye,Hmone Shwe Yi,Nweni Tun, Ko Than Khe,Absdf Hq,Ex Absdf,Aung Myint Han,Moe Aung
ထောက်လှမ်းရေး တစ္ဆေကြောက်ပြီး ကိုယ့်အချင်းချင်းလည်း ပြန်သတ်ခဲ့ကြပြီးပြီ။
ခုချိန်ထိတောင် ကိုယ့်အမှားကို မပြင်နိုင်ဘဲနဲ့... သူများကို လွှဲချချင်နေတုန်းပါလား။
သူတို့ရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကလည်း အံသြစရာကြီးနော်
အသက်တွေလည်း ကြီးကြပြီ၊ ရင့်ကျက်မှုတွေလည်း ရှိသင့်ပြီ။
စဉ်းစားလို့မရဘူ ဘာကြောင့် မရင့်ကျက်ကြသေးပါလိမ့်။
Min Aung သင်းကွပ်ခံရတဲ့ ဦးနှောက်နဲ့လေ
February5at 6:05pm · Like · 3
ဘကြီး မှိုင်း သူခိုးလူလူ မဟစ်ကျပါနဲ.။
သူခိုးလူလူ ဟစ်တာလောက် စိတ်ပျက်စရာ မရှိ။
မိမိတို. ပုံနှိပ်စာမျက်နှာများမှာ ငါပိုင်လို. လုပ်တာ၊ တင်ချင်သူကို တင်၊ ချချင်သူကို ချ၊ ငါ.သဘော လုပ်နေသူတွေလည်း အများကြီး ရှိပါတယ်။
spin propaganda spin editor တွေ အများကြီးပါ။
မြစ်မခက အင်တာဗျူး ဖေါ်မက်များ မှားနေရုံမျှမက၊ ကိုယ်က ပရိတ်သတ်ကို မစာနာ၊ ကိုယ်ဖားချင်တဲ.ပဲ လူကြီး အကြိုက်၊ ကိုယ်.လူကြီး အကြိုက်။ ကြေငြာပေးနေတာ၊ အနောက်နိုင်ငံမှာ ဆို အဲ သလိုမီဒီယာတိုက်မျိုး တရားစွဲခံရတယ်။
စွဲမယ်ဆိုရင်တော. စွဲစရာတွေက အများကြီးပဲ။ ထင်ရှား တဲ. အချက်က တော.---
principle of non-bias/ impartiality or principle of fairness
ဘက်မလိုက်၊ မျှမျှတတ၊ မှန်မှန်ကန်ကန် သတင်းရေးသားရမဲ. စံနှုန်းကို ချိုးဖေါက်လျှက်၊ မိမိ ဖြစ်စေချင်ကြားစေချင်တဲ.အတိုင်း -မိမိ ပိုင် မီဒီယာစာမျက်နှာများကို အသုံးပြုပြီး၊ လူတွေကို လိမ်ညာခြင်း၊ ကြောင်. အစွဲခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြစ်မခက spin lady လည်း- မဆင်ခြင်သေးပါလား။
February5at 6:31pm · Like · 6
Aye Aye Soe Win မြစ်မခက စပင်န်လေဒီ--ဦးခင်ညွန်.လေ၀င်နေတယ်။
February5at 6:57pm · Like · 4
L-Zaw Sai သြော် ..မေ ရယ် ..အေ ရယ် ..အင်တာဗျူးရယ် ...
February5at 7:57pm · Like · 1
Moe Aung မီဒီယာလောကထဲ ကို ၀င်တာ သိပ်မကြာ သေးတဲ. သမီးလေး တယောက်ကပြောဘူးတယ် ဗျာ ........ သူ.အသက်အရွယ် နဲ. ဆို၇င်တဲ. ၈၈ တို. A B S D F တို. ဆိုတာ သူမမွေးခင်က တည်ရှိခဲ.တာပါတဲ. .......သူဘယ်လောက်ဘဲ လေ.လာ စူးစမ်း စူးစမ်း ...ရရှိလာတဲ. အချက်အလက်တွေ က ခိုင်လုံ ပါတယ် ဆိုတာ အာမခံဘို. မလွယ်ပါဘူးတဲ. .. အဲဒါကြောင်. ဒါတွေကို သူ.အသက်အရွယ်နဲ. ရေး၇င် ..အမှားပါရင် သမိုင်းတရားခံ ဖြစ်မှာစိုးလို. သူဘာမှ မရေး ပါရစေနဲ.တဲ. ...တန်ဘိုးရှိလိုက်တဲ. စကားလေးဗျာ ....... ကဲ ....အဲ.လောက်ဆို .......A B သမိုင်း ရေးမယ်လို. ဆိုသူတွေ စဉ်းစားကြဗျာ ......
Wednesday at 5:21am · Like · 6
Hmone Shwe Yiသူများပြောတာကိုအဟုတ်ကြီးထင်ပြီးရေးချင်တာလျှောက်ရေးနေသောမမမေသင်္ကြန်ဟိန်းအားသနားပါသည်-
Wednesday at 5:27am · Like · 3
Aye Aye Soe Win နအထက က အကြိမ်ကြိမ် ကျမကို လာစည်းရုံးဘူးတယ်။ သူမရေးနေတဲ. စာအုပ် --ဘယ်သူ. ဘယ်အဖွဲ. သမိုင်းကြောင်းဆိုလားဘာလား ရေးဖို.။ ကူပေးပါဆိုပြီး လာလာပြောဘူးတယ်။သူမကသူ.ကိုယ်သူ- မဟာ ယုံကြည်မှုကြီးနဲ. ပြောဆိုနေလေတော.- ကြားရလေသော ကျမ က သွားတွေကျိန်းလွန်းလို.။ တကယ်ကျိန်းတာပါ။ ကိုယ်နားကြား များလွဲလေသလားတောင် တွေးမိလေရဲ.။ ကျမရေးမပေးချင်တောင် သူရေးထားတာကို အဲဒစ်လုပ်ပေးပါလို.ထပ်ပြောပြန်တယ်။ ။ ကျမ ကတော.ရီနေတယ်။ နားတွေသွားတွေကျိန်းခဲ.ရပါတယ်။
Wednesday at 5:32am · Like · 4
Wednesday at 5:33am · Like · 1
May Thingyan Hein · 8,503 like this
You, Aung Than Nyunt Aungnilai, Thar Swe, Thet Zaw and 45 others like this.
South Mountain ဘယ်သူလဲပြောပြပါလား
Naing Aung ဘယ်သူ့ကိုပြောတာတုန်း
Ko Ko Myo အဲလိုရင့်ကျက်တဲ့လူအတော်ရှာရခက်မယ်
Ar Dam သိချင်တယ် သိလိုရမှလား
Ar Dam ဆိတ်ဝင်စာလိုပါ
မနုဿအလင်္ကာရ သတိုးတေဇစောလုထိပ်ခေါင် မနေ့က ဖတ်တဲ့ စာအုပ်အရှိန်မသေသေးတာထင်တယ်
Ko Ko Myo အရင်လူကတစ်ချက်ခေါက်ရင်နောက်လူ
May Thingyan Hein သတ်ချင် သတ်လိုက်ပါ မပြောဘူးနော်။
Kyaw Zwa Thant အမရယ် ထောက်လှမ်းရေးမဟုတ် တဲ့သူကို ထောက်လှမ်းရေးပါ၊　သတင်းပေးပါ၊　ဆိုပီး　လခပေး နေ့ကြေးပေး ဆိုင်ကယ်ပေးပီး နာမယ်လိုက်ဖျက် ဒုက္ခပေးနေတဲ့ ဝိသမစီးပွားရေးသမားတွေ ရှိသေးတယ်
4 hours ago via mobile · Edited · Like · 1
Ar Dam သူတို့က တစ္ဆေကြောက် သားက တစ္ဆေမကြောက်ဘူး ပြောပြပါလား
Win Zaw မွေးကတဲကဆန်မစားဘူးတဲ့သူတွေ ဆန်ဆိုတာဘာလဲ ဆီဆိုတာဘာလဲ?ကိုယ့်ကို ကိုပြန်မေးကြည့်အုံး မသိရင်ပတွေးအရောက်သန်းလေးဆယ်ကိုမေးလိုက် မသိရင် သိအောင်လုပ်ပြီး ဆန်ဆိုတာစားကြည့်လိုက် ဒါမှသေရင်ဆန်စားဘူးတယ်ဆိပြီးလူတွေကိုထပ်ပြီး နှိပ်ဆက်ရတဲ့မိတ်ဆာဖြစ်မှာ
May Thingyan Hein ကျမက တစ္ဆေရော၊ သူရဲရော ဘာမှ မကြောက်တဲ့ အတွက် မပြောဘူး။
Song Bird တွန်သံတွေကြားနေရတယ်လား ။ အဟီး
Lily Htut i know...........her .....? this morning I read her status and now ur status. so I think...... heeeeeeheeerrrr .........Anyway.... meee.....per buuu naw.....htin ter pyaw ter....but I m so sorry you are fighting. : (
Burmer Aung မပြောရင် အာဘွါး
Hlaing Wintun Pls! Carry on, I would like to read. Thanks Ama
Posted by ဘရာဇီးငှက်ရိုး at 3:40 PM